भैरव रिसाल - कान्तिपुर समाचार
भैरव रिसालका लेखहरु :
नेतृत्व र असल शासन भनेर हुन्छ कि गरेर ? यसबारे दुविधा या भ्रम भयो । यही १६ मंसिर २०७५ मंगलबार प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले एउटा धर्मआबद्ध संस्थाकी विदेशी महामहिमको पावन करकमलबाट पारितोषिक ग्रहण गर्नुभएदेखि दिग्भ्रमित भएको हुँ ।
खुट्टी देख्दै चाल पाइयो
मान्छे शान्ति चाहन्छ, सबभन्दा पहिले । शान्तिपछि समृद्धि, समृद्धिका निम्ति होइन, सुखका निम्ति चाहेको हो समृद्धि । जन्मेपछि मर्नैपर्छ भन्ने धु्रव सत्य पनि प्राय: बुझेको हुन्छ, मान्छेले । मान्छेको अन्तिम इच्छा सजिलोसँग मर्न पाइयोस् भन्ने हुँदोरहेछ । यी कुरा सरल, सबैले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्न र लेख्न सकिन्छ ।
घुँडा धस्ने गणतन्त्र
यसपालाको बडादसैंले समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र नेपालको सांस्कृतिक उपहार नितान्त अनपेक्षित, ‘घुँडा मार्ने’ कुरूप अपसंस्कृति दिएर गयो  । सर्वोच्च सार्वजनिक सिंहासनमा बस्नेहरूले के सोच बनाए ? त्यो सोच नितान्त समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र सुहाउँदो भएन मात्र होइन, त्यसको उल्टो रूपमा देखापर्‍यो  ।
जनताबाट टाढिँदै राजनीति
केही दशकदेखि राजनीति जनताकहाँ जान छोडेको छ  । राजनीति होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसहरूमा बन्धक हुनलागेको छ  । राजनीति जनताकहाँ पस्ने भनेको निर्वाचनका बेलामात्रै हुनथालेको छ । जनताकहाँ राजनीति एकछिन पस्छ, तर बस्दैन ।
आजको संयुक्त राज्य अमेरिका हेर्दा अल्पविकसित, न्यून विकसित, विकासोन्मुख मुलुकका मान्छे अचम्म मान्छन्, आफ्नो देशको अवस्था देखेर । कहिले–कहिले त अत्तालिन्छ, कसरी बनाउने मुलुक भनेर । तर आजको अमेरिकाको १ सय १३ वर्ष अघिको अर्थात् सन् १९०५ का केही तथ्याङ्क चाखलाग्दा छन् ।
राष्ट्रसंघमा नेपाल पुग्दा
नेपालले राणाशासन ढलेपछि २०१२ सालमा मात्र संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पायो । र, त्यसको अर्को सालदेखि राष्ट्र संघको साधारण सभामा भाग लिन थाल्यो । २०१३ सालमा भएको एघारौं सभामा परराष्ट्र मन्त्री चूडाप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले सक्रिय भाग लियो ।
मैले भोगेको त्यो समय
रोग झाडाबान्ता उपचार आर्यघाट !मेरी आमालाई झाडाबान्ता लागेछ । उहाँलाई अस्पताल होइन, पशुपति आर्यघाट लगिएछ । त्यसरी अस्पताल नलगी आर्यघाट लैजाने निर्णय मेरा बाको सहमतिमा भएछ । बाको सहमति लिने कठोर त्यो निर्णयमा गाउँका बाभन्दा जेठाबाठा जान्ने–सुन्ने बाले पनि मान्ने बुजु्रकहरूको परामर्श प्रमुख कारण हो ।
सक्कली, खाँटी भारदारहरूको अनौठो स्वभाव हुँदोरहेछ । आफूले मालिक मानेकाहरूबाट जेजस्ता सजाय दिँदा वा शक्तिबाट हटाउँदा पनि सहेर बस्ने, मौन बस्ने धैर्य हुँदोरहेछ । यो सहिष्णुता, धैर्य र मौन संस्कार नवभारदार, भर्खर–भर्खर दरबार पसेका नवप्रवेशीहरूमा कोर्कालीपन, काँठेपन, उत्ताउलोपनको यदाकदा उत्तेजनासम्ममा पनि जाने स्वभाव हुँदोरहेछ ।